SSRC 132 Forex Scalping Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we-Forex Scalping SSRC 132 Forex Scalping Isu
SSRC 132 Forex Scalping Isu
Februwari 4, 2020
1 SSRC 132 Forex Scalping Isu
1.1 Izikhathi Zokuhambisa Ezisikhathi Eside Zokuthambekela Kwesikhathi Eside
1.2 Ukuhweba Strategy Concept
1.3 Thenga (Long) Isethaphu Trade
1.3.2 Misa Ukulahlekelwa
1.4 Thengisa (Short) Isethaphu Trade
1.4.2 Misa Ukulahlekelwa
1.5.1 Forex Ukuhweba Systems Ukufakwa Imiyalelo
1.5.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ipulatifomu Yokuhweba
1.5.3 Ungayifaka kanjani i-SSRC 132 Forex Scalping Isu?
Isikali esinomkhuba wesikhathi eside!
Abathengisi abaningi bezinsuku nezinceku ezikhulukazi bangena kwezohwebo ngokuzivumelanisa nethrekhi enkulu yezithombe ngenkathi benza inzuzo ngokubhalwa phansi okuncane emakethe.. Yize lokhu kungadingeki kepha kuyinto enhle kakhulu ongayenza. Ukuhamba ngomkhuba wesikhathi eside ngenkathi ukuhweba kumbhalo omncane kuzothuthukisa amathuba okusethwa kokuhweba kube yimpumelelo. Kepha kufanele sikwenze kanjani?
Abanye abathengisi bakwenza lokhu ngokubheka isikhathi esibekiwe esikhulu. Ngokwesibonelo, uma eshaya eshadini lemizuzu, abanye abathengisi basondeza mhlawumbe eshadini lemizuzu eyi-15 noma e-1. Abanye abathengisi bezinsuku, lapho ukuhweba eshadini lemizuzu engu-5 noma ishadi lemizuzu engu-15 kubheka ihora eli-1, 4-ihora noma mhlawumbe ishadi lansuku zonke. Abanye bangavele basondeze kumakhandlela amancane kakhulu ukuthi bakwazi ukulingana nawo amaningi esikrinini bese bezizwa bebheke ngasikhathi sinye kwezohwebo. Lezi ngezinye nje zezindlela ezibheka ukuthambekela kwesikhathi eside zenziwa. Kukhona izindlela eziningi zokwenza lokhu.
Izikhathi Zokuhambisa Ezisikhathi Eside Zokuthambekela Kwesikhathi Eside
Enye yezindlela ezilula zokuthola inkambiso yesikhathi eside ukusebenzisa isilinganiso eshukumisayo esinaka amakhandlela amaningi. Lokhu kungaba a 100, 200 noma 500 isikhathi sokuhamba esimaphakathi. Lokhu kungenye yezinye izengezo ezisetshenziswa kakhulu ezisetshenziselwa ukuthambekela kwesikhathi esijana.
Ukubona inkambiso ngokusebenzisa lezi zilinganiso ezihambayo ngokuvamile kwenziwa ngokunquma indawo yentengo ngokuhlobene nesilinganiso eshukumisayo. Uma intengo ingaphezulu kwayo, khona-ke ukuthambekela kwesikhathi eside kuthiwa yi-bullish. Uma kungaphansi kwayo, ke.
Ngokusebenzisa le ndlela, inhloso eyengeziwe futhi kulula ukuthola inkambiso yesikhathi eside ngokususelwa emithethweni esikhundleni sokuncika kwi-gutfeel. Kuvumela futhi umhwebi ukuthi abheke eshadini elilodwa futhi abe nomqondo wokuthi umkhombandlela wesikhathi eside ukhombisa ini.
Ukuhweba Strategy Concept
Leli su lisebenzisa isilinganiso esingu-132-exponential Moving A average (UMAMA) njengesisekelo sokunquma ukuthambekela kwesikhathi eside, osebenza njengesihlungi.
Uma intengo ingaphezu 132 UMAMA, sizobheka imakethi njenge-bullish ekude. Kanjalo, sizobe sisebenzisa ukuthenga abathengisayo kuphela. Uma Intengo lingaphansi ke, khona-ke imakethe ibhekwa njenge-bearish, futhi kuzothengiswa kuphela ukuhweba okuthengiswayo.
Izimpawu zizonqunywa yi- SSRC inkomba yangokwezifiso. I- SSRC Inkomba iyinkomba ye-oscillating ehambahamba endaweni ephakathi ku-zero. Kuyinkomba eboshwe enophawu olugcwele futhi olusetshenzisiwe lapho +/- 0.75 futhi 0.9, kanye nomkhawulo ku- +/- 1.3. Le nkomba ye-oscillating nayo idonsa kahle kakhulu. Kubuye kuthambekele ekuthini kufiphaze lapho imakethe ibukeka ingamandla kakhulu noma i-bearish futhi iqala ukugoba kuphela lapho inkambiso isizophela.
Sizobe senza ukuhweba ngokuqondisa i 132 I-EMA uma imakethe idlulelwa ngokweqile kususelwa ku SSRC inkomba. Isiginali yokungena ithathwa lapho SSRC umugqa weqa usuka endaweni eyeqile kuya ku +/- 0.9 umaka. Ukuhweba bese kuphuma lapho SSRC ulayini uqala ukugoba emuva.
132-inkathi Isilinganiso Sokuhambisa Esisondele (igolide)
Ubude besikhathi: 5-ishadi minute
Isikhathi Sokuhweba: yimuphi
lwemali Pair: yimuphi
Thenga (Long) Isethaphu Trade
Intengo kufanele ibe ngaphezu kwe- 132 UMAMA
Intengo kufanele iqale ukubuyisa iqonde ku 132 UMAMA
Lindela umugqa we-SSRC ukuze unwebeke njengokubuyiselwa kwentengo
Lindela umugqa we-SSRC ukuze weqe ngaphezu kwe -0.9 umaka
Faka i-oda lokuthenga ngokuvumelana nemithetho engenhla
Setha ukulahleka kokuma endaweni esekelwa eseduze kwekhandlela lokungena
Vala ukuhweba lapho nje intengo igoba phansi
Thengisa (Short) Isethaphu Trade
Intengo kufanele ibe ngaphansi kwe- 132 UMAMA
Lindela umugqa we-SSRC ozungeze ngokweqile njengokubuyiselwa kwentengo
Lindela umugqa we-SSRC ukuwela ngaphansi kwe +0.9 umaka
Faka i-oda lokuthengisa ekuvumelaneni kwemithetho engenhla
Setha ukulahleka kokumisa endaweni ephikisayo eseduze ngaphezulu kwekhandlela lokungena
Vala ukuhweba lapho nje intengo igoqa emuva
Leli su isu lokuphanga elivumela umhwebi ukuthi ahwebe ngomkhuba wesikhathi eside ngokusebenzisa i-EMA yesikhathi esingu-132.
Isikhombi se-SSRC siyasebenza futhi ekutholeni kahle ekunqumeni okufakiwe nokuphuma. Ngenxa yezindawo ezigcotshwe ngaphezulu ezimakwe yinkomba ye-SSRC, abahwebi bangabona ukuthi intengo isezingeni lapho kuthengiswa ngalo mkhuba. Ngokwesinye isandla, ngoba inkomba ye-SSRC ivame ukuthobisa lapho izinkambiso zamanani zenzeka, futhi ivumela umhwebi ukuthi abambelele kwezohwebo kuze kube sekupheleni kwendlela yesikhathi esifushane. Lokhu kuvumela amasu wokuhweba isilinganiso sengozi ephezulu ngenxa yokufaka nokuphuma, ngenkathi igcina isilinganiso esiphakeme sokulahlekelwa ngenxa ye 132 Isihlungi se-EMA.
Forex Ukuhweba Systems Ukufakwa Imiyalelo
SSRC 132 Forex Scalping Isu inhlanganisela Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Ingqikithi kwalesi simiso forex ukuletha uguquko anqwabelene idatha umlando kanye amasignali zokuhweba.
SSRC 132 Forex Scalping Isu inikeza ithuba lokuthi bazokwazi ukuhlonza izici ezihlukahlukene futhi amaphethini amanani dynamics okuyizinto ezingabonakali ngeso lenyama.
Ngokusekelwe kulolu lwazi, Abadayisi kuthathwa eminye intengo ukunyakaza futhi ulungise lesi simiso ngokufanele.
Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ipulatifomu Yokuhweba
Mahhala $50 Ukuqala Ukuhweba Ngokushesha
Ibhonasi Yesibambiso kufikela ku- $5,000
Uhlelo Lokuthembeka Olungenamkhawulo
Imiklomelo Yokuwina Umthengisi
Chofoza Lapha ukuthola Umhlahlandlela Wokuvula i-Akhawunti Yesinyathelo Ngesinyathelo
Ungayifaka kanjani i-SSRC 132 Forex Scalping Isu?
Landa i-SSRC 132 Forex Scalping Strategy.zip
Kopisha amafayela we-mq4 nama-ex4 ku-Directory yakho ye-Metatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Kopisha ifayela le-tpl (Isifanekiso) ku-Directory yakho ye-Metatrader / izifanekiso /
Qala noma qala kabusha iKlayenti lakho leMetatrader
Khetha Ishadi futhi esibekelwe lapho ufuna ukuhlola uhlelo lwakho forex
Qhafaza kwesokudla kushadi lakho lokuhweba bese uqhubeka “Isifanekiso”
Hambisa kwesokudla ukukhetha i-SSRC 132 Forex Scalping Isu
Uzobona i-SSRC 132 Forex Scalping Strategy iyatholakala kwi Ishadi yakho
*Qaphela: Akuwona wonke amasu we-forex eza namafayela we-mq4 / ex4. Amanye amathempulethi asevele ahlanganisiwe nezinkomba zeMT4 ezivela kuMetaTrader Platform.
Thola Ukufinyelela Kokulanda
Isiqephu esedluleIsibonisi se-XPWMA Digit HTF MT5
Isihloko esilandelayoIsikhombi Sokuthula MT5
Ultimate Oscillator Reversal Forex Trading Strategy
Isikhombi sePivot Points kanye necebo lokuhweba
Ilifa Trader Forex Ukuhweba Isu
Dynamic Inani Channel Forex Ukuhweba Isu
Supply and Demand Bounce Forex Ukuhweba Isu
Simple QQE Forex Ukuhweba Isu
Isikhathi Sokuvala Amakhandlela Inkomba Yokuhlala ye-MT4
Forex Ukuhweba Nge GBP / USD
Mashi 16, 2020
Ukuhweba Forex Nge USD / JPY
I-Supply and Demand Forex Trading Strategy ichazwe ngezibonelo
Mashi 25, 2018
Isu Lama Forex MACD Lichazwe Ngezibonelo
Septhemba 29, 2016
Self Advance Decline line with floating levels MT5 Indicator
Septhemba 17, 2021
Self Advance Nokwehla Line MT5 Indicator
Septhemba 16, 2021
Izinkomba ze-Forex MT54279
Izinkomba ze-Forex MT42324
Amasu we Forex1079
Amasu Okuqhamuka Forex67
Amakomidi e-Forex - Septhemba 17, 2021 0